1-10kg Capacity စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် China Lab မှသုံးထားသော Fluidized-bed Jet Mill | Qiangdi
Jet Mill သည် Lab တွင်အသုံးပြုသည်။ နိယာမသည် fluidized bed ၏နိယာမကိုအခြေခံသည်။ Jet Mill သည်ခြောက်သွေ့သော superfine pulverizing ပြုလုပ်ရန်မြန်နှုန်းမြင့်လေစီးကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ အမြန်မြန်သောစီးဆင်းမှုတွင်အနှေးများသည်။
မြန်ဆန်သောလေစီးဆင်းမှုများအလယ်တွင်အရှိန်မြှင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲတိုက်မိခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းများအားမြေပြင်တွင်ကျစေသည်။ လိုအပ်သည့်အမှုန်များကိုဆိုင်ကလုန်း Separator နှင့် Collector တို့ကခွဲထုတ်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပစ္စည်းများသည်လိုအပ်သောအရွယ်အစားသို့မရောက်မှီထပ်မံဖြန့်ဖြူးရန်ကြိတ်ခွဲခန်းသို့ပြန်ပို့သည်။
1. အဓိကအားဖြင့်စွမ်းရည်နိမ့်သော ၀ ယ်လိုအား၊ ၀. ၅-၁၀ ကီလိုဂရမ် / h၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
၃။ အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း၊ ဆူညံသံနိမ့်ကျခြင်း၊ အညစ်အကြေးမရှိခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲနေစဉ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနည်းပါးခြင်း။
သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောပုံသဏ္,ာန်၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ စနစ်သည်အသိဉာဏ်ရှိသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်ထိန်းချုပ်မှု၊
လေကောင်းကောင်းခံနိုင်ပြီးသန့်ရှင်းသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းပါ။ အဆင်ပြေသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အော်တိုပစ္စည်းကိရိယာလည်ပတ်မှု
၆ ။ ကျယ်ပြန့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် -ပစ္စည်းများ၏ကြိတ်ခွဲမှုအသေးအဖွဲဟာဘီးဘီးများနှင့်စနစ်၏လည်ပတ်မြန်နှုန်းကိုညှိမှတဆင့်ထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်d=2～ 15μmသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်
၇ ။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်၎င်းသည်အခြားလေထုအအေးခံစက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၀% မှ ၄၀% သောစွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်။
၈ ။ အနိမ့် wear။ ။ ကြိတ်ခွဲခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အမှုန်များတိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းကြောင့်မြန်နှုန်းမြင့်အမှုန်များသည်နံရံကိုထိသည်။ ၎င်းသည် Moh's Scale9အောက်ရှိပစ္စည်းများကိုကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
၎င်းသည်သတ္တုမဟုတ်သောသတ္တုရိုင်းများ၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ အနောက်တိုင်းဆေးဝါးများ၊ ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာ၊ စိုက်ပျိုးရေးဓာတုဗေဒနှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်းများအတွက်ဓာတ်ပြုခြင်းအတွက်အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
၁။ တည်ဆောက်ပုံရိုးရှင်းသည်၊ အ ၀ တ်လျှော်ပေါက်၊
၂။ အမှုန့်များမသောက်စေရန် ဦး ထုပ်ပါသောမော်တာ
၃။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံ - မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုသည်နည်းသည်
၁။ ISO9001-2000 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်လုံး ၀ ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊
၀ ယ်ယူခြင်းမှစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆေးခြင်းမှအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအထိတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ခြင်း၊
၃။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်အတွက် QC ဌာနအတော်များများကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိတ်ခွဲစက်များ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများအားပျက်စီးမှုမှကင်းဝေးစေရန်နှင့်ရှောင်ရှားရန်
3. အရံပစ္စည်းကိရိယာများ၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကိုထောက်ပံ့လိမ့်မည်
3. အရည်အသွေးအာမခံချက်နေ့စွဲကိုစတင်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှ၊ သင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လျှင်ကုန်ကျငွေကိုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူပါမည်။
4. မသင့်လျော်သောကိုင်တွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းကိရိယာပျက်ကွက်မှုအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (သင့်လျော်သောကုန်ကျစရိတ်ကိုကောက်ခံပါမည်) ။
ရှေ့သို့ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး disc-type ဂျက်ကြိတ်ခွဲစက် QDB-50 QDB-100 QDB-150